Maraykanka oo laga yaabo in uu kala geeyo qoysaska sharcidarrada ku soo gala | Baydhabo Online
Maraykanka oo laga yaabo in uu kala geeyo qoysaska sharcidarrada ku soo gala
Dawladda Maraykanka ayaa ka fikiraysa in ay kala gayso carruurta iyo waalidkood haddii la qabto iyaga oo si sharci darro ah uga soo talaabaya xadka Maksiko.
Xoghayaha arrimaha gudaha ee dalka Maraykanka John Kelly ayaa warbaahinta CNN u sheegay in ujeedada go’aankani uu yahay isku day lagu doonayo in la baajiyo qoysaska safarada khatarta ah ka soo gala bartamaha Ameerika.
Tobannaan kun oo waalid iyo carruur isugu jira, kuwaas oo badankood ka soo cararaya qalalaasaha Honduras iyo El Salvador ayaa la xiray iyaga oo xadka ka soo gudbaya.
Sanado ayay qaadan kartaa inta maxkamaduhu ay go’aan ka gaarayaan codsiyada ay soo gudbisteen ee ah in magangalyo la siiyo.
Warbaahinta ayaa Jimcihii ku warantay in siyaasadan cusub ay ka dhigan tahay in waalidka lagu hayn doono xabsiyada inta sharciga laga waafajinayo ama loo diyaarinayo qaabkii loo masaafurin lahaa.
Saxaafadda oo si caro leh ugu jawaabtay Trump
Maksiko oo diiday siyaasadda tarxiilka ee Trump
Laakiin masuuliyadda carruurta waxaa la wareegi doonta waaxda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha ee loo soo gaabiyo HHS ilaa iyo inta looga helayo qaraabadooda oo Maraykanka ku nool oo qaada masuuliyaddooda ama ay dawladdu ku wareejinayso cid ay baartay oo lagu kalsoonaan karo.
Markii Isniintii la waydiiyay Kelly waxrbixinada ay warbaahintu tabinayaan wuxuu ku jawaabay haa, waan ka baaraan dayagaa si dadka looga niyad jabiyo in ay soo galaan safarkan halista ah. Taas ayaana rasmiyan ka baaraan dagayaa ayuu hadalka sii raaciyay.